LONILONY NITERA-DOZA :: Olona fito maty tamin’ny adim-pianakaviana • AoRaha
LONILONY NITERA-DOZA Olona fito maty tamin’ny adim-pianakaviana
Zava-doza ity nitranga tany Fompohony- Mahasoa ao amin’ny Kaominina Antanamarina Sakay, any Ikalamavony, tamin’ny alarobia 27 jona lasa teo ity. Mpianakavy monina amin’ny tanàna roa samy hafa no nifanafika ka olona fito no namoy ny ainy. Ny enina tamin’ireo avy ao Mahasoa ary ny iray kosa avy any Fanjatoana sy Marozaza any amin’ny Kaominina Solila. Trano am-polony maro ihany koa no may nodoran’ny mpanafika. Miezaka mandamina amin’ny hiverenan’ny fihavanana eo amin’ireo mpihavana ny manampahefana any an-toerana sy ireo zandary avy any Fianarantsoa.
“Voafehy ny zava-misy any an-toerana, amin’izao fotoana izao. Samy mbola sahirana mandevina ny havany ny an-daniny sy ny an-kilany. Na izany aza, mijanona any an-toerana sady miezaka mampihavana, ireo manam- pahefana sivily sy ireo mpitandro filaminana”, hoy ny avy amin’ny Zandarimaria any an-toerana.
“Tsy maintsy atao ny fampihavanana ireo olona ireo. Tafiditra ao anatin’ny asanay ny fitandroana ny filaminana sy ny fandriam- pahalemana. Eo an-dalam-panaovana izany izahay. Antsoina ireo ray aman-dreny avy amin’ny an-daniny sy ny an-kilany”, hoy kosa Randriamiaramanana Lalasoa, lehiben’ny distrikan’Ikalamavony.
Nodorana ny trano
Araka ny loharanom-baovao hafa dia nisy lehilahy iray vao avy nivoaka ny fonja niara-nisotrosotro tamin’ny lehilahy namany iray hafa tany Sandratoha. “Rehefa lany ny zava-pisotron’izy ireo dia nankany Mahasoa izy ireo hividy zava-pisotro mahamamo. Misy renirano manelanelana ireo tanàna roa ireo. Vao tafita ilay renirano izy ireo no nisy nitifitra avy hatrany ka maty teo ny iray. Nitsoaka niverina teny amin’ny tanànany ilay iray hafa na dia efa naratra teo amin’ny tanany aza. Io no nampandre ireo teo an-tanàna. Lasa indray izy ireo nanafika tany Mahasoa. Raikitra ny tifitifitra sy fira famaky. Olona dimy no maty teo no ho eo ary isan’ ireo ilay nitifitra nahafaty iry lehilahy voalohany tany amoron-drano. Mbola nodoran’izy ireo ihany koa ny trano am-polony an’ny havan’io lehilahy io”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Toy ny efa nifampiandry kendritohana ihany ireto mpianakavy ireto, araka ny fitantaran’ny mponina any an-toerana. Voalaza mantsy fa nisy tantara nampalahelo ny an-daniny tamin’ny nanagadrana ny dadaben’izy ireo izay ny an-kilany no voalaza fa mpitory tamin’ izany fotoana. Ankoatra ny fanafihana sy famonoana dia nalain’ireo mpanafika ihany koa ny ombin’ireo voatafika rehetra.
FANAFIHANA ORINASA :: Jiolahy telo tratra niaraka amin’ny vola 20 tapitrisa ariary